Astronomy .. Ramadaan waa Khamiista Bisha May 17-keeda…. Ciidduna Waa Jimco | Xaqiiqonews
Astronomy .. Ramadaan waa Khamiista Bisha May 17-keeda…. Ciidduna Waa Jimco
Agaasimaha Website-ka Baahiya wararka la xariira Cirka ee Falastiiniyiinta ahna xubin ka mid ah Guddoomiyaasha UNESCO ee dhanka Space-ka iyo Astronomy-ka, David Al-Tarwa, ayaa sheegay in xisaabinta ay muujinayso in bisha Ramadaan ee sanadkan bilaaban doonto Khamiista ay taariikdu tahay 17-ka bisha May ee soo socota.
Tarwa ayaa intaa ku daray in bisha Ramadan ee sanadka 1439 H ay noqon doonto galabta Talaadada, May 15-keeda 2:48 daqiiqo, hase ahaate waqtigaasi ma jrito cid arki karto bisha dhamaan wadamada islaamka, sababtoo ah bisha ayaa dhici doonto ka hor inta aysan qoraxda dhicin.
Tarwa waxa uu leeyahay muuqaalka bisha waa suurtagal xiligaasi in lagu arko telescopes ama indhaha qaawan waa hadii jawiga uu yahay mid dagan, Waqooyiga Ameerika, Bartamaha iyo Koonfurta Baasifiga.
Arbacada, oo ku beegan bisha May 16-keeda, aragtida Bisha ayaa la filayaa inay suurtogal tahay in lagu arko indhaha qaawan ama telescopes qaybo badan oo adduunka ah, oo ay ku jirto Falastiin. Sidaas awgeed waxaa la filayaa in dalalka Carabta iyo Islaamka ay ku dhawaaqi doonaan Khamiista, 17ka May, maalinta koowaad ee bisha Ramadaan ee 1439 H.
Bisha Shawwaal gaar ahaan maalinta koowaad ee Ciidda Fitriga sanadkan ayaa sidoo kale noqon doona Jimcaha 15ka Juun.